Tetibola 2014 : hakana TVA ny zanaka akoho - Informations et Actualités sur Madagascar
Economie Tetibola 2014 : hakana TVA ny zanaka akoho
Tetibola 2014 : hakana TVA ny zanaka akoho
by Alpha world on 09 h 55 in Economie
Anisan’ny zava-baovao voarakitry ny Tetibolam-panjakana 2014 ny fakana hetra ho an’ny sarany manokana (TVA) ho an’ny zanaka akoho. Araka ny fanazavan’ny mpandraharaha iray,
tataovana TVA ny fanafarana azy avy any ivelany sy ny fivarotana azy amin’ny mpiompy. Mazava ho azy fa tsy maintsy ampidirin’ny mpandraharaha any amin’ny fitantanany ny kaontim-bolany ireo, ary hiakatra ho azy ny vidiny ho an’ny mpiompy, izay hiantraika any amin’ny mpanjifa.
Vokany, singa iray hafa koa hampiakatra ny vidin-javatra hiantraika any amin’ny vidim-piainana ity tranga iray ity.
Araka ny fepetra efa noraisin’ny sampandraharahan’ny hetra, tsy maintsy ampiasaina ny faktiora eo amin’ny fifampiraharahana ara-barotra. Anarivony ny mpandraharaha madinika miompy akoho eto amintsika, ary tsy aty an-tanàn-dehibe ihany fa miparitaka manerana ny faritra. Midika izany fa hihahenjana ny fanaraha-maso ny fitantanam-bolan’izy ireny, ary niaraha-nahita ny fanoherana nataon’ny mpivarotra mpamongady.
Tataovana 20% ny mikarama 250.000 Ar
Ankoatra izany, fepetra vaovao nofaritan’ity Tetibola 2014 nasiam-panovana ity koa ny karama raisin’ny mpiasa raikitra. Tataovana 2.000 Ar isam-bolana isaka ny mpiasa, ho an’ireo mandray karama mitovy na latsaky ny 250.000 Ar. Io ilay antsoina hoe « Hetra avy amin’ny fidiram-bolan’ny mpiasa » (Irsa). Mijanona ho 20%-n’ny karama raisina kosa ny Irsa ho an’ny ireo mandray mihoatra ny 250.000 Ar isam-bolana.
Raha ireo no aravona, midika izany fa mitady ny fomba rehetra hahazoam-bola ny fanjakana. Saingy, tsikaritra fa ireo sokajin’olona hita fa voaara-maso no hitakiam-bola, fa tsy misy ny politika mazava ho an’ireo mampidi-bola betsaka nefa tsy voafehy. Singanina amin’izany, manana ny zo fiarovana ara-tsosialy ve ny mpiasa eny amin’ny sehatra hafa rehetra, toy ny lafiny fitaterana, raha tsy hitanisa afa-tsy ny mpamily sy ny mpanampy, ohatra, ny mpamongady ?